Indlela esebenza kwixesha elide
Ngoxa u kufunda o uthetha isiTshayina kwinqanaba elisiseko akulona lukhuni kunokuba ufunde ezinye iilwimi ( kulula nakwezinye iindawo ), ukufunda ukufunda ukubhala ngokuqinisekileyo kwaye ngokungathandabuzeki kunzima kakhulu.
Ukufunda ukufunda nokubhala isiTshayina akulula ...
Kukho izizathu ezininzi zezi. Okokuqala, kuba ukhonkco phakathi kolwimi olubhaliweyo noluthethiweyo lubuthathaka kakhulu. Ngelixa useSpeyin unakho ukufunda ngokubanzi ukuba uyayifunda xa uthethiwe kwaye unokubhala into ongayithethayo (ibha iingxaki ezincinci zesipelingi), ngesiTshayina ezimbini ziphantsi okanye zincinane.
Okwesibini, indlela abamele isiTshayina abamele izandi ziyinkimbinkimbi kwaye idinga okungakumbi kunokufunda iilfabhethi. Ukuba uyazi ukuba ungathini into ethile, ukubhala akuyona nje into yokujonga indlela iphepheni yayo, kufuneka ufunde abalinganiswa ngabanye, indlela abhaliweyo ngayo nendlela badibene ngayo ukuze benze amagama. Ukufunda nokubhala, udinga phakathi kwama-2500 kunye no-4500, ngokuxhomekeka kwinto othetha ngayo ngegama elithi "ukufunda". Udinga amaxesha amaninzi ngaphezulu kweli nani lamagama.
Nangona kunjalo, inkqubo yokufunda ukufunda nokubhala ingenziwa lula kakhulu kunokuba ibonakala kuqala. Ukufunda izinhlamvu ezingama-3500 akunakwenzeka kwaye kunye nokusetyenziswa okufanelekileyo kunye nokusebenza ngokufanelekileyo, ungakuphepha ukudibanisa (okwenene ngumngeni omkhulu kubabengeziqalo). Sekunjalo, i-3500 yinani elikhulu. Kuya kuthetha ukuba ngababalimi abalishumi abalishumi ngosuku. Ukongezwa kuloo nto, kuya kufuneka ukuba ufunde amagama, adibeneyo abalinganiswa ngamanye amaxesha anesibindi esicacileyo.
... kodwa akumele kwenzeke!
Kubonakala kunzima, kunene? Ewe, kodwa ukuba udibanisa la mahlamvu angama-3500 ukuya kwiincinci ezincinci, uya kufumana ukuba inani leenxalenye ozifunayo ukulufunda lide kakhulu ukusuka kuma-3500. Enyanisweni, ngeempawu ezingamakhulu ambalwa, unokwakha ininzi yalezo zibalo ezingama-3500 .
Ngaphambi kokuba siqhubekele phambili, mhlawumbi kufanelekile ukuba siqaphele apha ukuba ndisebenzisa igama elithi "icandelo" kakhulu ngamabomu endaweni yokusebenzisa igama elithi "ukugqithisa", okuyi-subset encinane yezinto ezisetyenziselwa ukuhlukanisa amagama kwizichazi-magama. Ukuba udidekile kwaye ungaboni indlela ahluke ngayo, nceda khangela le nqaku .
Ngoko, ngokufunda iinqununu zabalinganiswa, udala i-repository yezakhiwo zebhloko ongazisebenzisa ukuqonda, ukufunda nokukhumbula abalinganiswa. Oku akusebenzi kakuhle kwixeshana elifutshane kuba ixesha ngalinye ufunda umlingiswa, akufanele ufunde kuphela umlingiswa, kodwa kunye neenkalo ezincinci ezenziweyo.
Nangona kunjalo, lotyalo mali luya kuhlawulwa ngokukhawuleza kamva. Kungenokuba yinto efanelekileyo yokufunda zonke iinqununu zabo bonke abalinganiswa ngqo, kodwa gxininisa kubaluleke kakhulu kuqala. Ndiza kuzisa ezinye izityebi ukuncedisa bobabini kunye nabalinganiswa phantsi kwabo kwicandelo lawo kwaye apho ungayifumana khona inkcazelo engakumbi malunga naziphi izixhobo zokufunda kuqala.
Kubalulekile ukuqonda ukuba icandelo ngalinye linomsebenzi kumlingisi; ayikho ngethuba. Ngamanye amaxesha isizathu esivakalayo ukuba umlingiswa ubonakala ngathi ulahlekile kwixesha elide, kodwa ngokuqhelekileyo liyaziwa okanye kubonakala ngokucacileyo ngokufunda umlingiswa.
Ngamanye amaxesha, inkcazo ikwazi ukuvela ngokwayo ekholisa kakhulu, kwaye nangona kungenako i-etymologically ichanekile, inokukunceda ukuba ufunde kwaye ukhumbule lo mlingiswa.
Ngokubanzi, izakhi zifakwe kubalinganiswa ngezizathu ezibini: kuqala ngenxa yendlela abavakala ngayo, kwaye yesibini ngenxa yoko bathethayo. Sibiza ezo zixhobo zefonetiki okanye ezivakalayo kunye neenxalenye zesenanti okanye intsingiselo. Le ndlela yindlela ebalulekileyo yokujonga kubalinganiswa abavame ukuvelisa iziphumo ezinomdla kwaye ezinoncedo kunokuba babhekisise inkcazo yendabuko yendlela abalinganiswa abakha ngayo . Kukwafanelekile ukuba ube nalo emva kwengqondo yakho xa ufunda, kodwa akudingeki ukuba ufunde ngokubanzi.
Makhe sijonge umlingisi owona mfundi ufunde ngexesha elide: 妈 / 媽 ( lula / kwendabuko ), ebizwa ngokuthi ( yokuqala ithoni ) kwaye ithetha "umama".
Inxalenye ekhohlo 女 ithetha "ibhinqa" kwaye ihambelana ngokucacileyo nenjongo yomntu wonke (umama wakho mhlawumbi ungumfazi). Inxalenye efanelekileyo 马 / 馬 ithetha "ihashe" kwaye ngokucacileyo ayihambelani nentsingiselo. Nangona kunjalo, kuthiwa i-mǎ ( ithoni yesithathu ), esondele kakhulu ekubhaliweyo komntu wonke (kuphela ithoni ehlukile). Le ndlela yindlela abalingiswa baseTshayina basebenzayo ngayo, nangona kungengabo bonke.
Konke oku kusishiya ngamakhulu (kunokuba amawaka) abalinganiswa abawakhumbule. Ngaphandle kwaloo nto, sinomsebenzi owongezelelweyo wokudibanisa izixhobo esizifundele kubalinganiswa beenkomfa. Yiyo esiya kujonga ngoku.
Ukudibanisa iibalati ngokwenene akunjalo kunzima, ubuncinane ukuba awusebenzise indlela efanelekileyo Le nto kukuba ukuba uyazi ukuba zithini iinqununu, ukubunjwa komlingana ngokwayo kuthetha into ethile kwaye yenza kube lula ukukhumbula. Kukho umahluko omkhulu phakathi kokufunda i-jumble jumble of strokes (nzima kakhulu) kunye nokudibanisa izinto eziziwayo (ngokulula).
Ukuphucula imemori yakho
Ukudibanisa izinto ngenye yezona ndawo eziphambili zokuqeqeshwa kweememori kunye nento abantu abanomdla kuzo kumawaka eminyaka. Kukho iindlela ezininzi, ezivela ngaphandle apho zisebenza kakuhle kwaye zifundisa indlela yokukhumbula ukuba i-A, B kunye neC isabelana nomnye (nangaloo myalelo, ukuba uyayithanda, nangona oku akusoloko kudingekile xa kuziwa kwiTshayina abalinganiswa, kuba uziva uvakalelwa ngokukhawuleza kwaye kwaye inani elincinci kuphela labalinganiswa linokuxutyushwa ngamacandelo anobumba obuhamba ngokungahambiyo).
Ukuba awukwazi nto malunga neendlela zokukhumbula, ndincoma ukuba ufunde le nqaku kuqala, okanye ukuba ungenalo xesha elide, jonga nje intetho yeTED nguJoshua Foer. I-takeaway ephambili kukuba loo memori yinto enekhono kwaye yinto onokuyisebenzisa. Okuqhelekileyo kubandakanya ukukwazi kwakho ukufunda nokukhumbula abalingisi baseTshayina.
Ukukhumbula abalingisi baseTshayina
Indlela efanelekileyo yokudibanisa iinqununu ukudala umfanekiso okanye umfanekiso oquka onke amanqaku ngendlela engalibalekiyo. Oku kungafanelekanga, kuhlekisayo okanye kugxininiswe ngandlela-thile. Ngokuqinisekileyo oko kukukwenza ukhumbule into yinto ofuna ukuyijonga ngetyala kunye nephutha, kodwa ukuhamba ngokungenangqondo nokugqwetha ngokuqhelekileyo kusebenza kakuhle kubantu abaninzi.
Unako ukuqhuba okanye usebenzise imifanekiso engokoqobo kunokuba ucinga nje kuphela, kodwa ukuba ukwenza, kufuneka uqaphele ukuba awuqhekeki isakhiwo somlinganisi. Ndithetha ntoni na oku? Ngokucacileyo, imifanekiso oyisebenzisayo ukufunda abalingisi baseTshayina kufuneka ulondoloze iibhloko ezakhiweyo ezilolu hlobo.
Isizathu salokhu kufuneka sibonakale kweli nqanaba. Ukuba usebenzisa nje isithombe esifanelekileyo kumlingiswa lowo, kodwa engagcinanga isakhiwo somlinganiso, kuya kuba luncedo ekufundeni ukuba ngumlingiswa. Ukuba ulandela isakhiwo somlinganisi, ungasebenzisa imifanekiso yecandelo ngalinye ukuze ufunde amashumi okanye amakhulu amabali. Ngamafutshane, ukuba usebenzisa imifanekiso emibi, ulahlekelwa yinzuzo yeebhloko zokwakha ezixutyushwa kule nqaku.
Izibonelelo zokufunda abalingisi baseTshayina
Ngoku, makhe sijonge iisisombululo ezimbalwa zokufunda ibhloko yokwakha yabalingisi baseTshayina:
Kickstart ukufunda kwakho udidi kunye ne-100 radicals eziqhelekileyo-Olu luhlu lwe-radicals ezi-100 eziqhelekileyo. Ndathetha ngasentla ukuba sinenkxalabo enkulu kumacandelo apha, kungekhona amaqhinga, kodwa kwenzeka ukuba ama-radicals aqheleke ukuba ngamacandelo e-semantic, ngoko ke olu luhlu luyaqhubeka luncedo. Ndiyidale ngokwalo kuba andizange ndifumane ezinye iintlobo ezilungileyo.
I-Hanzicraft - Le yiwebhsayithi efanelekileyo kakhulu evumela ukuba udilize abalinganiswa baseTshayina kwiindawo zabo zecandelo. Ndabhalela ngokutsha ukuhlaziywa malunga nesayithi apha. Qaphela ukuba ukuphazamiseka kukubonakala kakuhle, ngoko ayikhathalelekanga ukuba ichanekile ngokusemthethweni. Unokufumana kwakhona ulwazi lwefowuni apha, oluphinde lusekwe ngokuthelekiswa komatshini wokubhengezwa kwamacandelo kunye nomgca opheleleyo (akuchanekanga ngokusemthethweni, nokuba ngamanye amagama). Ndiyayithanda le ndawo kuba iyakhawuleza kwaye kulula ukuyisebenzisa.
I-Zdic.net - Le isichazamazwi esine-intanethi, esingasimahla esinikela ngolwazi olufanelekileyo malunga nesakhiwo somlinge ohambelana nokokuko esikuziyo malunga nokuphuhliswa komgca othile (yiyokhokelo, kungekhona ngokuzenzekelayo).
I-ArchChinese - Esi sisinye isichazamazwi se-intanethi esinikeza amandla okubhidliza abalinganiswa kwaye ubone iinqununu kumxholo (ngolwazi oluqhelekileyo, olunqabile kwezinye izichazi).
Iimpawu ze-Semantic ezivela kwi-Outline Linguistics - Ezi zi powusta zibonisa izixhobo ze-semantic eziyi-100 kwaye ngaphandle kokuzifundisa kakhulu, zibukeka zikhulu eludongeni lwakho. Bafika ngolwazi lokusetyenziswa kunye neenkcazelo ezichanekileyo (ngokwenziwa ngabantu abanolwazi oluninzi ngabalinganiswa baseTshayina).
Oku kufanele kube ngokwaneleyo ukuze uqalise. Kuya kubakho iimeko ongenakuzifumana okanye ezingenangqiqo kuwe. Ukuba uhlangabezana nazo, unokuzama iindlela ezahlukeneyo. Yenza umfanekiso ngokuthe ngqo kumlingisi okanye wenze intsingiselo yakho. Oku kungcono kunokuzama ukukhumbula ukubetha okungenanto, okunzima kakhulu.
Ekugqibeleni, ndingathanda ukuphinda ndiphinde oko ndathethile ekusungulweni. Le ndlela yokufunda abalingisi baseTshayina ayiyi kukhawuleza kwixesha elifutshane ukususela ekubeni ngokwenene ufunda abantu abalinganiswa (kubalwa iinqununu zabalinganiswa njengabalinganiswa apha). Inani elipheleleyo leenkcukacha ozifunayo ukuba uzibophezele kwimemori likhulu. Abalinganiswa abaninzi obafundileyo, nangona kunjalo, imeko iguquka ngakumbi kwaye iya kuba yindlela ejikeleze.
Ukuba uphatha iimpawu zesiTshayina njengezithombe, ukuze ufunde amahlamvu angama-3500, kufuneka ukuba ufunde imifanekiso engama-3500. Ukuba uwaphule uze ufunde izixhobo, kufuneka ufunde ambalwa ambalwa. Olu luhlobo lokutyalo-mali olude kwaye aluyi kunceda kakhulu ukuba uvavanyo olusasa!
Umyalelo we-Stroke wokubhala abalinganiswa baseTshayina
Isingeniso kwi-Lino Printing
Ukuqonda Umbutho kwiNgqungquthela kunye neNtetho
"I-Baltimore Waltz" Izihloko kunye nabalinganiswa
Ngaba Ufanele Usebenzise Umcebisi Wokufudukela?
'Ukutya kwasekuseni eTiffany' kunye noHolly Golightly
Isingeniso soThengiso oluSisiseko